गीता केसी ह’त्या: श्रीमानलाई अस्पताल जान्छु भनेर भतिजसँग घुम्न जंगलतिर ! ३ वर्षदेखि अफेयरमा
September 5, 2020 4301
भैंसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको ह त्या अरो पमा भतिजा निर्मल केसीलाई प्रह’रीले पक्रा उ गरेको छ । निर्मल शनिबार बिहान भैंसेपाटीस्थित घरबाट प क्राउ परेका हुन् ।
प्रह’रीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गीताको घाँटी थि’चेर ह त्या गरिएको हो । केसीको परिवारले उनी हरा’एको भन्दै तीन दिनअघि महानगरीय प्रह’री परिसर, ललितपुरमा उजु’री दिएको थियो ।
केसीको श व शुक्रबार साँझ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० मुलडोलस्थित सामुदायिक वनमा ह त्या गरेको अवस्थामा सडकबाट दुई सय मिट’रभित्र लेलेको जंगलमा फेला परेको थियो ।
ह त्या आरोपी केसीवि’रुद्ध ज्या’न सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरेर विस्तृ’त अनुसन्धान भइरहेको प्र:हरीले जनाएको छ ।
तीन वर्षदेखि अ’फेयरमा
निर्मल र गीता विगत ३ वर्षदेखि अफे’यरमा रहेको प्रह’रीको प्रारम्भिक अनु’सन्धानबाट खुलेको छ । ह त्या आरो पी निर्मलले गीतासँग अफे’यरमा रहेको स्वीकारेको प्र’हरीले जनाएको छ ।
श व फेला परेलगत्तै प्रहरीले अ’नुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धा’न सुई निर्मलतिर सोझिएपछि प्रह’रीले भैंसेपाटीस्थित घरबाट निर्मललाई पक्रा’उ गरेको ललितपुरका प्र’हरी प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिए ।
मृत’कको श्रीमान घरमा नभएको बेला निर्मल जाने आउने समेत गरेको अनु’सन्धानमा संलग्न एक प्रह’रीले बताए । ‘सहयोग गर्ने बहानामा मृत’क केसी र निर्मलबीच नजिकको सम्ब’न्ध रहेको खुलेको छ,’ ती अधिकृतले रातोपाटीसँग भने ।
मृत’क गीता केसी पुल्चोकस्थित अल्का अस्पता’लको कर्मचारी रहेको खुलेको छ । अस्पतालमा ‘हाउस किपिङ’ को रुपमा कार्यरत थिइन् मृ’तक केसी ।
निर्मलले नै मृ’तक केसीलाई अस्पता’ल लगिदिने र ल्याइदिने गर्थे । अनु’सन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सोही दिनपछि मृ’तक केसीले श्रीमान’लाई ढाँटेर अस्पताल जानुपर्ने भयो भन्दै घरबाट निस्केकी थिइन् ।
निर्मलले अस्प’ताल नगई घुम्न जाउँ भनेपछि उनीहरु लेलेको जंगल गएको प्र’हरी अनु’सन्धानबाट खुलेको छ । जंगल पुगेपछि केही समय उनीहरु एकान्तमा गएर बसेको खुलेको छ ।
‘त्यहिँ उनीहरुबीच झग’डा हुन्छ,’ अनुसन्धा:नमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, ‘सामान्य झ’गडाले ह त्याको रुप लिएको देखिन्छ ।’ यद्यपी झग’डाको कारण आर्थिक ले’नदेन हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
घाँ’टी थि’चेर गीताको ह त्या गरिएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । मृ:तक केसीको शरीरमा केही चो’टप’टक समेत देखिएको छैन । यद्यपी पोष्टमा’र्टम रिपोर्टपछि मात्रै ह त्याको कारण भन्न सकिने एसएसपी राई बताउँछन् ।
मृ’तक केसीको श्रीमानले र’क्सी खाएर सधैं गीतासँग झग’डा गर्ने गरेको प्रह’रीले बताएका छन् । सो कुरा निर्मलले राम्रोसँग नियालिरहेका हुन्थे ।
श्रीमानबाट अप’हेलित भएपछि गीतालाई निर्मलले हरेक कुरामा सहयोग गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मृ’तक केसीले निर्मललाई पैसा पनि राख्न दिएकी थिइन् ।
‘राख्न दिएको पैसा मागेपछि ह त्या गरेको हुनसक्छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, ‘आर्थिक मा’मिलाको विषय’लाई लिएर नै केसीको ह त्या भएको हो । आरो’पीले समेत घट’ना स्वीकारेका छन् ।’ – रातोपाटी
Nextकोरोनाले नेपालमा आज ९ जनाको मृ:त्यु, यी जिल्लाका हुन् मृतक…
ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए। बसमै देखेर पर्यो लभ (भिडियो)
के साच्चै १२ लाख चोरेर भागिन् त सोनीका ? पारसले खोले यस्तो रहस्य (भिडियो सहित)
महानायक राजेश हमालले जब भुइँमै बसेर खाना खान थाले… (भिडियो सहित)